Semalt Inotsanangura Maitiro Okuti Iite Iyo Yakawanda Yekugadzirwa Kwezvinhu uye SEO Interrelation
6AV1122-2BA00 SIEMENS.5;color:#5f5f5f;text-align:justify;"> Kugutsikana kwekutengesa nekutsvaga injini yekugadzirisa zvirongwa zvakasimbayakabatana uye kana yakabatanidzwa zvakakodzera, iri nani pane PB & J. Idzi mazano maviri ndeyekupa vanhu zvakananga izvo zvavanoda.Nokuda kwehupenyu hwako hunowanikwa nemafungiro, unoda injini yekutsvaga.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt Digital Servies inotsanangura nzira yekuita zvirongwa izvi zviviri, inogovera ruzivo rwezvinhu zvinokosha zvepaji peji rinofanira kuvayakagadzirirwa vanhu vose uye kutsvaga injini.
Kuwana mazwi ekurudyi
Sei uchiita izvi kune injini dzekutsvaga: Mashoko emashoko ndiwo maitiro makuru eIta kuti mapeji ako awanikwe. Smart SEO nyanzvi hazviongorori zvemabhizimisi chete zvavanoda kuverenga, asiwo mazwi nemitsarakuti vatarisi vavo vangaishandisa kuti vazviwane. Simba rakashata rinokurudzira ruzivo rwavo rwakapoteredza misoro mikuru yematatu kana kupfuura mamwe mazwi aripozvisiri izvo zvakabatana nebasa rako kana chigadzirwa. Izvi zvinowedzera kuderedza kukwikwidzana uye motokari nenzira iyo, zvichiita kuti zvive nyore kutarisa.
Sei uchiita izvi kuvanhu: Mutsara mutsva mazwi ekutsvaga ane tsikakuchinjwa kuva mutungamiri uye kutengesa zvakanaka. Kuti urove zvinyorwa zvekugadzirwa kwegoridhe, unoda kuwana maverengi mazhinji emisipi mazwi makuru uye akakwirira kumusoro kwavari.
Kuwana zita rakakodzera uye meta tsanangudzo tags
Sei uchiita izvi kune injini yekutsvaga: Tsanangudzo idzi hadzisizvakakosha sezvavakagara vachiita asi vanogona kunge vakakanganisa maitiro ako. Chinyorwa chikuru uye tsanangudzo inowedzera nhamba ye"zvakakosha" vanotsvaga vanosarudza pawakarongedza saka vachiratidza unhu. Izvi zvinoguma kune kuwandisa kwekufambisa mumatunhu.
Sei uchiita izvi kune vanhu: Iyi ndiyo chete yeruzivoinoonekwa kuvanhu pavanotsvaga mufananidzo werwendo. Tsanangudzo inonyatsomiririra zviri mumapeji ako, uye iyo inotaurakune chinangwa chekutsvaga kwevashandisi, iko kudanidzira kune chiito kuti vanhu vauye pane peji rako. Nenzira iyi, iwe unokwezva vaeni vakakodzera vanozivapane zvaunotarisira kubva peji rako.
Kushandisa mazwi ezvinyorwa uye kusiyanisa kwavo mumuviri wezvinyorwauye mumagetsi emufananidzo, kamwe chete kana kaviri zvakare mumusoro
Sei uchiita izvi kune injini dzekutsvaga: Chenjerera tsvakurudzoyakashandura kusvika kumusoro mamateji. Ita basa iri kwauri nekukwanisa kuisa mazwi makuru uye kusanganisira kusiyanisa mavari. Zvose maererano nekushandiswayemashoko akabatanidzwa.
Sei uchiita izvi kuvanhu: Vanhu vane tsika yekuongororakuburikidza neIndaneti pane kuverenga. Vakuru-vheji vakanaka kuverenga uye vanogona kukwevera vanhu kuverenga peji nekuita kuti zvive nyore kuverenga.
pamwe chete nezvose zvataurwa pamusoro, zvinyorwa zvinofanira kunge zvichinyengedzakukwezva nekuchengetedza vashanyi. Mashoko aya anofanira kunge ari nyore kuwana chimwe chinhu chinoshandiswa pasina. Zvose zviviri SEO neKutengeserana kweNyayainofanira kushanda pamwe chete, sezvo pasina zvinyorwa zvekuverengwa nevanhu, maitiro e SEO anganzi aingova spam chete. Saka kusika azvinyorwa zvinokodzera kuverenga nekugovana ndiyo chinangwa chikuru chekutarisa.